28.11.2012 နေ့ဖတ်ရန်သတင်းများ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
by Myanmar Journal on Tuesday, November 27, 2012 at 12:35pm ·
အမျိုးသမီး စစ်မှုထမ်းတွေ ခန့်မယ်
သူနာပြု သိပ္ပံ ဘွဲ့ရ တွေကို စစ် သူနာပြုတွေ အဖြစ် ခန့်ထား ဖို့ စီစဉ်နေ
အမျိုးသမီး စစ်မှုထမ်း တွေကို လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ခန့်အပ် သွားမယ်လို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ စစ်ရေးချုပ်က ထုတ်ဖေါ် ပြောခဲ့ ပါတယ်။
စစ်ရေး၊ တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ သူနာပြု၊ ငွေစာရင်း၊ ရုံးလုပ်ငန်းနဲ့ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်း တွေမှာ အမျိုးသမီး စစ်မှုထမ်းတွေ ခန့်ထားမယ့် အစီ အစဉ်တွေ ပြုလုပ် နေပြီ ဖြစ်ပြီး အခု ချိန်ထိတော့ အမျိုး သမီး ဆရာဝန်၂ဝ နဲ့ သူနာပြု အမျိုးသမီး ၇ ယောက်ကို ခန့်ထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဒုတိယ စစ်ရေးချုပ်က ပြောကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းက အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် တစ်ယောက်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အမျိုးသား လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ အစိုးရရဲ့ အာမခံ ချက်များ၊ ကတိ များနှင့် တာဝန် ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မီတီ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ထွန်း ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့နဲ့ ဝန်ကြီး ဌာနတွေ မကြာခင်က တွေ့ဆုံ ခဲ့ရာမှာ ဒုတိယ စစ်ရေးချုပ်က ပြောခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင် ခဲ့တဲ့ အဲဒီ အမတ်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တပ်ကြပ်ကြီး အဆင့် အမျိုးသမီး သားဖွား ဆရာမ တစ်ရာ ကျော်ကို သင်တန်း ပေးနေပြီ လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
တပ်မတော် ဆေး တက္ကသိုလ်မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ဖို့ သွားဘက် ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ရ ဆရာဝန်တွေ ကိုလည်း လျှောက်လွှာတွေ ခေါ်ယူ ထားပြီးပြီလို့ သိရ ပါတယ်။
အရင်တုန်းက စစ်သူနာ ပြု သင်တန်းတွေ ပေးပြီး စစ်တပ် အတွင်းမှာ အမျိုးသမီး သူနာပြုတွေ တာဝန် ထမ်းဆောင် စေခဲ့တာ ရှိပေမဲ့ အခုလို သူနာပြု သိပ္ပံ ဘွဲ့ရ သူတွေကို တပ်မတော်မှာ စစ်သူနာပြုတွေ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ဖို့ ခေါ်ယူတာ ကတော့ အခု အကြိမ်က ပထမဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
အာရာဖတ်ရဲ့ ရုပ်အလောင်း စတင် တူးဖော်
မစ္စတာ အာရာဖတ်ရဲ့ အလောင်းကို စစ်ဆေးဖို့ နမူနာ အစိတ်အပိုင်းတွေ ယူပြီး ပြန်ပိတ်ခဲ့
ပါလက်စတိုင်း ခေါင်းဆောင် ယာဆာ အာရာဖတ် သေဆုံး ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း ရင်းမှန်ကို စစ်ဆေး ဖေါ်ထုတ် နိုင်ဖို့ သူ့ရုပ် အလောင်းကို ပြန်လည် တူးဖေါ် စစ်ဆေးမှုတွေ စတင် ခဲ့ပါပြီ။
၂၀၀၄ ခုနှစ်က ကွယ်လွန် ခဲ့တဲ့ မစ္စတာ အာရာဖတ်ဟာ အဆိပ်သင့် သေဆုံး ခဲ့တာလား ဆိုတာကို ဖေါ်ထုတ် နိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့ ရုပ်အလောင်းက အစိတ် အပိုင်း နမူနာတွေကို ဆွစ်ဇာလန်၊ ပြင်သစ်နဲ့ ရုရှား မှုခင်း ကျွမ်းကျင်သူ တွေကို ပေးအပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူ မစ္စတာ အာရာဖတ်ရဲ့ အဝတ် အစားတွေမှာ ရေဒီယို သတ္တိကြွဓါတ် polonium 210 ကို ဆွစ်ဇ် မှုခင်း ကျွမ်းကျင် သူတွေ တွေ့ရှိခဲ့ အပြီးမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ် လက စပြီး ပြင်သစ် ကျွမ်းကျင်သူ တွေက သေမှု သေခင်း စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေ စလုပ်ခဲ့ တာပါ။
မစ္စတာ အာရာဖတ်ရဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းတွေ အရတော့ သူဟာ သွေးလေ မမှန် မှုကြောင့် လေဖြတ် ခံရတဲ့ ဝေဒနာ တွေကို ခံစား ခဲ့ရတယ်လို့ ဖေါ်ပြထား ပါတယ်။
သူကွယ်လွန်ချိန် တုန်းကတော့ သူ့အလောင်းကို ခွဲစိတ် စစ်ဆေး တာမျိုး မလုပ်ဖို့ ကျန်ရစ်သူ ဇနီးသည် ဆူဟာက ကန့်ကွက်ခဲ့ ပါတယ်။
ခုတော့ အမှန် တရားကို ဖေါ်ထုတ် နိုင်ဖို့ဆိုပြီး သူ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည် တူးဖေါ် စစ်ဆေးခွင့် ပြုဖို့ ပါလက်စတိုင်း အာဏာပိုင် တွေကို ပန်ကြားခဲ့ ပါတယ်။
မစ္စတာ အာရာဖတ်ရဲ့ ရုပ်အလောင်း ကနေ နမူနာ ယူဖို့ ပါလက်စတိုင်း ဆရာဝန် တဦးကိုပဲ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဆွစ်ဇ်၊ ပြင်သစ်နဲ့ ရုရှား မှုခင်း ကျွမ်းကျင် သူတွေ ရှေ့မှာ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပါလက်စတိုင်း အာဏာပိုင်တွေက AFP သတင်း ဌာနကို ပြော ပါတယ်။
အဲဒီ ကနေ ရလာတဲ့ နမူနာ တွေကို အခု စတင် စစ်ဆေး တော့မှာ ဖြစ်ပြီး လပေါင်း အတော် ကြာမယ်လို့ ယူဆရ ပါတယ်။
အဲဒီ စစ်ဆေးမှုတွေ ကနေ တိကျ ခိုင်မာတဲ့ ရလဒ် အဖြေတွေ ရလာဖို့ မျှော်လင့်နေတယ်လို့ ယာဆာ အာရာဖက်ရဲ့ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်း လည်းဖြစ် PLO ပါလက်စတိုင်း လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ရဲ့ လက်ရှိ အမှု ဆောင် ကော်မီတီ အဖွဲ့ဝင် တဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ Hanan Ashrawi က ပြောပါတယ်။
ကွယ်လွန်ချိန်မှာ မစ္စတာ အာရာဖတ်ဟာ HIV ဒါမှမဟုတ် ကင်ဆာ ရောဂါ ခံစား နေရတယ် ဆိုတဲ့ ထင်ကြေးပေး ပြောဆိုမှု တွေလည်း ရှိခဲ့ ပါတယ်။
အစ္စရေး အစိုးရ ကတော့ မစ္စတာ အာရာဖတ် သေဆုံးမှုဟာ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်မှု မရှိဘူးဆိုပြီး အခိုင်အမာ ငြင်းဆိုထား ပါတယ်။
စစ်တွေကို ထွက်ပြေး လာတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ နေရပ် ပြန်ပို့မယ်
စစ်တွေမြို့နယ် အတွင်း မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ နေကြ သူများ
ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ အောက်တိုဘာလက ပေါ်ပေါက် ခဲ့တဲ့ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူတွေ အတွင်း စစ်တွေကို ထွက်ပြေး လာကြတဲ့ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည်တွေကို အစိုးရက သူတို့ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ မြို့နယ်တွေကို ပြန်ပို့ စီစဉ်နေ ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မူတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြို့နယ်တွေက မူဆလင် ဒုက္ခသည် တွေဟာ စက်လှေတွေနဲ့ ထွက်ပြေးလာကြပြီး လောလောဆယ် စစ်တွေ သဲချောင်း နားက မန်ဇီ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ နေထိုင် နေကြ ပါတယ်။
ပဋိ ပက္ခ တွေကြောင့် ကျောက်ဖြူ၊ ပေါက်တောနဲ့ မြေပုံ မြို့နယ် တို့က ထွက်ပြေး လာသူ မွတ်ဆလင်တွေ အားလုံးက စစ်တွေကိုပဲ လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စစ်တွေ မြို့နယ် အတွင်းက ရွာတွေမှာ နေရာ ပြွတ်သိပ် နေကြရပြီး၊ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ဆန်နဲ့ တခြား အကူအညီတွေကိုလည်း မြို့နယ် အလိုက် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တွေကို ခွဲခြမ်း ပေးထားတာကြောင့် ဒုက္ခသည် အများကြီး လာရောက် နေထိုင်ကြတဲ့ စစ်တွေ မြို့နယ် အတွင်းမှာ လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင် ရတာ မနိုင်မနင် ဖြစ်လာ လို့ သူတို့ကို ယခင် နေရပ်ဆီ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ဖို့ စီစဉ် ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှု လက်မှု ဝန်ကြီး ဦးသာလူချေက ဘီဘီစီကို ပြော ပါတယ်။
ပေါက်တော ဘက်လာတဲ့ ဒုက္ခသည် တွေဟာ စစ်တွေ တက္ကသိုလ် အနီးတဝိုက် မှာလည်း ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် နေအိမ်တွေ ဆောက်ပြီး နေထိုင် လာကြတဲ့ အတွက် မလိုလား အပ်တဲ့ ပြဿနာ တွေလည်း ပေါ်ပေါက် လာနိုင်တယ် လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒုက္ခသည် တွေကို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်း တွေနဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အန်ဂျီအို တွေက ကူညီနေပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ အထိ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၈ သန်း လိုအပ်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
အဲဒီ ထဲက တချို့က ထောက်ပံ့ ငွေတွေ ရရှိ ထားပေးမဲ့ နောက်ထပ် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၄၁ သန်း လိုအပ် နေသေး တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူသားချင်း စာနာမှု အကူ အညီ ပေးရေး ဆိုင်ရာ ကုလ သမဂ္ဂ ညှိနှိုင်းရေး ရုံးက အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ ဒဿမ ၃ သန်း ထပ်မံ ကူညီမယ်လို့ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ကပဲ ကြေညာလိုက် ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်မှု တရားဝင်စတင်
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင် ကြမယ့် သမ္မတလောင်း နှစ်ယောက်
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆွယ်ပွဲ တွေကို တရားဝင် စတင် လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တောင်ကိုရီးယား စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရဲ့ သမီး ဖြစ်သူ ပတ်ဂျုံဟဲ Park Geun-hyeနဲ့ အဲဒီ စစ်ခေါင်းဆောင် ဟောင်းက ဖမ်းဆီး ထောင်ချခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူ တို့ ယှဉ်ပြိုင် ကြမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
သူက တောင်ကိုရီးယားရဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး သမ္မတ ဖြစ်လာဖို့ ရည်မှန်း နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၀ ပြည့်လွန် နှစ်တွေ အတွင်းက သူ့ ဖခင် ပတ်ချုံဟီး Park Chung-hee အာဏာ ရရှိလာခဲ့တဲ့ စစ်တပ်က အာဏာ သိမ်းယူ ခဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမီး ဖြစ်သူ ပတ်ဂျုံဟဲက ကာကွယ် ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူက အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တဲ့ အပြင် နိုင်ငံ့ စီးပွားရေး၊ မြောက်ကိုရီးယား အရေးတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလယ် အလတ် မူဝါဒ တွေကို ချပြခဲ့ ပါတယ်။
ပတ်ဂျုံဟဲ အကြိတ် အနယ် ယှဉ်ပြိုင် ရမယ့်သူကတော့ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကို လက်ဝါးကြီးအုပ် ထားတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့ အခွင့်ထူး ခံရမှု တွေကို တိုက်ခိုက် ပြောဆိုတဲ့ အတိုက်အခံ လစ်ဘရယ် ပါတီက မွန်း ဂျေအင် Moon Jae-in ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားစီရင်ရေးပိုင်းမှာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ကင်းအောင် လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှုးက VOA ကိုပြောပါတယ်။ ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ကော်မတီဝင် တချို့ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ တရားရုံး တချို့ကို သွားရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက် ခုလို ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တရားရုံးတွေကို ရှောင်တခင် သွားရောက်စစ်ဆေးစဉ်မှာ ဘာတွေတွေ့ ခဲ့ရသလဲ။ ပြင်ဆင်သင့် တာတွေကို ဘာတွေ အကြံပြုနိုင်သလဲ ဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ ဘန်ကောက်ရုံးက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မစုမြတ်မွန်က တင်ပြပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက တရားရုံးတွေဟာ အများပြည်သူ ယုံကြည် ကိုးစား အားထားရလောက်တဲ့ တရားရုံးတွေဖြစ်သင့်တယ်လို့ ပြောထားတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီက ဒီကနေ့ တနင်္လာနေ့မှာ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ တရားရုံး ၃ ခုကို သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ အတိအကျ ကြိုတင် အသိပေးမထားဘဲ တရားရုံးတွေကို သွားစစ်ခဲ့တာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကော်မတီအတွင်းရေးမှုး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းမြင့်က VOA မြန်မာပိုင်းကို ခုလိုပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ကော်မတီဥက္ကဌလည်း ပါပါတယ်။ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ကျနော်တို့ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် လေး၊ ငါးဦးနဲ့ တရားရုံးအဖွဲ့ဝင် သုံးဦးပေါ့၊ ပျဉ်းမနားတရားရုံးရယ်၊ ဇဗ္ဗူသီရိက မြို့နယ်တရားရုံးရယ်၊ နောက်တခုက ခရိုင်တရားရုံးရယ်၊ သွားပြီးကြည့်ရှု့စုံစမ်းပါတယ်။ ကျနော်တို့က ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘူးတော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာ မန္တလေးတိုင်း ရုံးတွေသွားမယ်၊ ဒီလောက်ပဲပြောထားတာပေါ့။ ကြိုက်တဲ့ရုံး ရွေးသွားတာပေါ့။ တရုံးချင်း ဘယ်နေ့ ဘယ်ရုံးသွားမယ်ဆိုတာတော့ မပြောတော့ဘူး။ ဒီဇင်ဘာဆိုလည်း ဒီလိုပဲပေါ့၊ ဘယ်တိုင်းကိုသွားမယ်။ ဒီလောက်ပဲပေါ့။ ကျန်တာကတော့ ကျနော်တို့ နံမည်ကြီးတဲ့ မြို့တွေရွေးတာပေါ့။”
November လ ၂၃ ရက်နေ့ကပဲ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို တင်ပြခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာထဲမှာ တရားရုံးတွေကို ရှောင်တခင် Surprise check လုပ်သင့်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကြိုတင် အကြောင်းကြားထားတဲ့ အခါ တရားခွင်တွေပြန်ချိန်းထားတဲ့အတွက် အမှုသည်တွေ သက်သေတွေကို စုံစုံလင်လင် တွေ့ရှိမေးမြန်းခွင့် မရတာ၊ တရားရုံးတွေက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကြောင့် အတိအကျ ကြိုတင်ပြောမထားဘဲ သွားကြည့်သင့်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကနေ့လို့ ရှောင်တခင်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာ ဘာတွေတွေ့ခဲ့ရပါသလဲ။
“တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအတွက် သွားကြည့်ကြတာပေါ့နော်။ သွားကြည့်ကြတဲ့အခါကျတော့ တရားရုံးတွေမှာလည်း အခက်အခဲတွေရှိတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဟိုတုန်းက အိုလံဘီယာလက်နှိပ်စက်တွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ရတာ။ အဲ့တာတောင် တလုံးပဲ တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျန်တာတော့ လက်ရေးတွေနဲ့ လိုက်နေရတာတွေ့ရတာပေါ့နော်။ အမှုတွေလည်း ကျနော်တို့ ကော်မတီဥက္ကဌအပါအဝင်၊ ဝင်ရောက်နားထောင်ပြီးတော့ ကြည့်ရှု့လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်းဖြင်းတွေ့တာကတော့ အမှုသည်၊ သက်သေ၊ ရှေ့နေတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ပေါ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကနေပြီးတော့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာမျိုးတွေလည်း ကြားခဲ့ရတယ်။ နောက်တခုက ဥပဒေနဲ့မညီတာတွေလည်း ကြားခဲ့ရတယ်။ နောက်တခုက သက်သေခံဥပဒေနဲ့ မပြည့်စုံတာတွေလည်း ကြားခဲ့ရတာပေါ့နော်။ အခုလောလောဆယ်တော့။”
အခုလို တရားရုံးတွေကို သွားရောက်စစ်ဆေး လေ့လာတဲ့အခါမှာ အမြန်ဆုံး ပြင်သင့်တယ်လို့ မြင်ရတဲ့ ကိစ္စတွေကရော ဘာလို့ ပြောနိုင်ပါလဲရှင့်။
“တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံးက လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကင်းဖို့ရယ်၊ နောက်တခုက အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဖို့ရယ်၊ လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ခွင့်ရဖို့ကတော့ အရေးကြီးတာပေါ့၊”
ဒီကနေ့ တရားရုံးတွေကို သွားရောက်တဲ့အခါမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လေ့လာ ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့လဲ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ် မျှတတဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ် ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီက ကြိုးစားနေချိန်မှာ ကော်မတီဖြစ်စေချင်တဲ့ အတိုင်း နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေကို ဥပဒေနဲ့ အညီအကာအကွယ်ပေးတဲ့ တရားရုံးတွေဖြစ်လာဖို့က အချိန်ပေး ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးကိုနီက သုံးသပ်ပါတယ်။
“ ဒီတရားစီရင်ရေးစနစ်ကို မူလက အင်္ဂလိပ်လက်အောက်က အခြေခံခဲ့တဲ့ Common Law System နဲ့ စခဲ့တယ်။ နောက် ၁၉၆၂ခုနှစ် အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျနော်တို့က ဘာမှန်းမသိတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကို ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ တရားစီရင်ရေးစနစ်က တော်တော်လေး ပျက်သွားတယ်။ တခါ ၁၉၇၄ကျတော့ ဆိုရှယ်လစ် Law of System ဆိုပြီး တခါအသစ်ထွင်ပြန်တယ်။ သို့သော် ဒါလည်း ဆိုရှယ်လစ် မမြောက်ပါဘူး။ အရင် Common Law လည်း ပျက်သွားတယ်ပေါ့။ တခါ စစ်တပ်က ၁၉၈၈ အာဏာပြန်သိမ်းတဲ့အခါမှာ တရားစီရင်ရေးဟာ လုံးဝကို အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်ကို ရောက်သွားပြီးတော့ ပျက်ပြားသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့တော့ ဒီဟာကို ကျနော်တို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကတော့ တော်တော်လေးကို ကြိုစားပြီး လုပ်ရဦးမှာပါ။”
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီကတော့ တရားရုံးတွေကို သွားရောက်လေ့လာပြီးတော့ တွေ့ရတဲ့ ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေကို နောင်အစီရင်ခံစာတွေ တင်တဲ့အခါမှာ ထောက်ပြအကြံပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး အရေးတကြီး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ADB ကပြောဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူဦးရေအားလုံးရဲ့ ၄ ပုံ တပုံပဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေတာပါ။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချို့တဲ့နေသရွေ့ တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကောင်းမွန်အောင် ကြိုးပမ်းနေမှုအပေါ် ဆိုးဆိုးရွားရွား အဟန့်အတား ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ မနီလာမှာ အခြေစိုက်တဲ့ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ် က ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက လူတဦးချင်းစီရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအား အသုံးပြုနိုင်မှုအခြေအနေဟာ အာရှတိုက်အတွင်း အနည်းပါးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ ADB ရဲ့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ လူ ၄ ယောက်မှာ တယောက်သာ လျှပ်စစ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တချို့အစွန်အဖျားဒေသတွေမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အနေအထားဟာ ၁၆ % လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စွမ်းအင်အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသုံးသပ်ရာမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်နိုင်အောင် လုံလောက်တဲ့ အခြေအနေ ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရတယ်လို့ ADB ကပြောပါတယ်။ ရေနံနဲ့ သဘာဝရဲ့ ရှာဖွေတူးဖော်မှုတွေရှိတဲ့အပြင် တခြား သယံဇာတ အရင်းအမြစ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် စွမ်းအင်သုံးစွဲနိုင်မှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ အားနည်းနေမှုက အဟန့်အတား ဖြစ်နေတယ်လို့ ADB ကပြောပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ စစ်အုပ် ချုပ်ရေးလက်အောက် စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး အထီးကျန်ဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု မရှိသေး တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြန်လည်နလံထူလာတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဆိုရေးရှိပြီ ဟု ထင်မြင်သည်။ (မင်းဒင်ရေးသည်။)
ဒီမိုဖက်တီး ခေါ် ခွန်ဒီးယမ်း ခေါ် မေဇင်အေးသို့ ရှေ့သ...
မြန်မာ့အရေးဝေဖန်သုံးသပ်သူ ဒေါက်တာဇာနည်နှင့် အင်တာဗ...
အလွဲများနဲ. ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံ
MTV EXIT ၏ ဖြစ်ရပ်မှန်လူကုန်ကူးမှု မှတ်တမ်းဗီဒီယို ...
ဓာတုဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဘောင်အတွင်းက လူ (ဘောင်တွေကို ချိန်ညှိခြင်း)
မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်း မရပ်တန့်ဖို့ တရုတ်သံရုံး ပြေ...
ဦးပိုင်လူ များ မမြင်ချင်
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ခိုးကူးစာအုပ်ငယ် ဈေးကွက် ကြီးမားလာ
ဟာသ စာတိုများ ....
မြန်မာ့ ဆွေမျိုးစပ် ဝေါဟာရများ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှို့ဝှက်မြှပ်နှံထားတဲ့ ဗြိတိ Sp...
ညွှန်းကြားရေးမှုး ဦးဇော်ဌေး(ခ) ဦးမှူးဇော်မှ သတင်းထုတ...
“ ဤ ”ကို “ကျွဲ” ဖတ်ရန်အတွက် အုပ်စုဖွဲ့ ညီညွတ်ကြလေေ...
တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ကိုသာ ပထမဦးစားပေး အနေ...
ပရိသတ် ဖြစ်သွားသော တရားခံများ
မုံရွာမြို့ ကံကုန်းကျေးရွာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ေ...
“စီမံဂိမ်း နှင့် စာရင်းအင်”
((( လီကွမ်းယု အလိုရှိသည် )))
အီ ဂိုိ - လူ သား ဖြ စ် မှု ရဲ့ လ က် ရှိ အခြေ အ ...
ဘုံးကထိန် (သို့ ) မြို့နယ် သံဃာ့နာယကအဖွဲ့၏ ပဉ္စလက်ြ...
ရှောင်ရမယ့် စကားအသုံးအနှုန်း ၅၀ - အပိုင်း ၁ ၊ ၂
ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်ဦးမှာ (၁) (EPISODE 14)
ဦးနှောက်ကိုပျက်စီးစေသော အကြောင်း ၁၀ ချက်
ကထိန်အာနိသင် ၅ - ပါး။
လူ့ဘဝကို ထိန်းကျောင်းတဲ့ နေရာမှာ ရသစာပေက လိုအပ်တာပဲ
နိုင်ငံတော် ကို အကြောင်းပြပြီး လူပါးဝတဲ့သူတွေ ချမ်...
Data သုံးစွဲနှုန်းဖြင့် မိုဘိုင်းအင်တာနက်အသုံးပြုခေ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား မေတ္တာရပ်ခံခြင်း
မျက်ဝန်းမှတစ်ဆင့် သိနိုင်သော သူ့အကြောင်း
Language Online ပေ့ခ်ျထောင်ခြင်း အကြောင်း
"Hand of Hope "......ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုနှုန်းများ ကျ...
ပျက်စီးနေသော တရားစီရင်ရေးနှင့် ချည့်နဲ့နေသော မဏ္ဍိုင...
တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မယ်ဇလီဖူးသုပ် စားရခြင်းအကြောင်း
ဒါကို အာဏာပိုင်တွေက မလိုက်လျှောပါဘူး..။
ဒေါ်စုနှင့် ဦးသိန်းစိန် ‘ကမ္ဘာဆန်ဆန် တွေးခေါ်သူ’ သတ်မ...
2013 Kyaw Thu’s First Breakout Calendar
ဆေးပေါင်းခတဲ့ည” နှင့် "မဲဇလီဖူး၏ ကျန်းမာရေးစွမ်းပကား
မြန်မာဆက်သွယ်ရေးရဲ့ ပြည်သူလူထုအပေါ် ဂုတ်သွေးစုပ်မှု။
ဘဝမှာ ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ဖို့ ဘာအချက်တွေ လိုပါသလ...
လေဖြတ်မည့် ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ (၁၀) ချက်
...... ရင်ကွဲနာ ......
မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော သူတော်ကောင်းလက္ခ...
အချိန်ကာလပြ အီဒီယမ် ၁၅ လုံး
သစ်ထူးလင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၇-၁၁)
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်က စိန်ခေါ်သံများ ...
*** စာများများ ဖတ်ပါ *** or [ စကားလက်ဆောင် ]
What is Sexy ?????????
အိမ်တစ်အိမ်၏ ပိုမွှားအများဆုံးနေရာ ခြောက်နေရာ ........
ကိုမိုးသီး ၊ ဦးနု ၊ မဟာဗမာ နှင့် ဘင်္ဂါလီကုလား ပြဿနာ...
အမေရိကန် - တရုတ် Power အားပြိုင်မှုကြားက မြန်မာ့တပ...
စင်္ကာပူတွင်အလုပ်လုပ်ကြသော မိန်းကလေးတို့၏ အန္တရာယ်
အရုပ်တစ်ရုပ် နှင်းဆီဖြူတစ်ပွင့်နဲ့ စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်...
အဖေ့အတွက် ဆေးပေါလိပ်ကလေးပါ (ဖြစ်ရပ်မှန် ၀တ္ထုတို)
မိဘကျေးဇူး အထူးကျေအောင် ဆပ်နည်း
စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေသည့် ရေ
ရယ်ချင်သောသူများအတွက် Message လေးတွေပါ။
ဝမ်းဗိုက်ချပ်ရပ်လိုသူတိုင်း ဆောင်သင့်၊ ရှောင်သင့်ေ...
တရုတ်၏ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ဖိအားများနှင့် မြန်မာ
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအကြောင်း (အယ်ဒီတ...